नमुना औषधिको दुरुपयोग गर्ने रवि मेडिकोका सञ्चालक पक्राउ -
⠀⠀⠀⠀ समाचार को लागि सर्वश्रेष्ठ मंच !
नमुना औषधिको दुरुपयोग गर्ने रवि मेडिकोका सञ्चालक पक्राउ
विराटनगर । विराटनगरमा बिरामीलाई बिक्री नै गर्न नमिल्ने विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका नमुना औषधिको अनाधिकृत भण्डारण (स्टोर) गर्ने गरिएको फेला परेको छ । कोरोना महामारीका समयमा बजारमा अभाव हुनसक्ने औषधिको अनुगमनमा निस्किएको टोलीले आइतबार दिउँसोतिर एउटा घरमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा ठूलो परिणामको नमुना औषधि बरामद गरेको छ ।
विराटनगर–१५ का रवि रजकले घरमा भण्डारण गरेको ठूलो परिणामको नमुना औषधि बरामद भएको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रमुख सञ्जीव कट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एन्टिवायोटिक, कफ सिरफ, सेनिटाइजर, पेन किलर इन्जेक्सन लगायतका ४६ काटुन नमुना औषधि बरामद गरिएको छ । विभागका अनुसार ‘फिजिसियन सेम्पल’का रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने नमुना औषधि अवैध तरिकाले राख्ने गरिएको पुष्टि भयो ।
बरामद औषधिको विलविजन समेत नभएको र नमुना औषधिमा नयाँ लेबल टाँस गरेर अर्को कम्पनीको लेबल राखेर विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । छापा मार्दा ५ कार्टुन स्टिकर र लेबल समेत बरामद भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी संतोष खड्काले जानकारी दिए ।
प्रहरीले रजकको घरदेखि विभिन्न बैंकको १ सय ७० वटा एटीएम पनि बरामद गरेको छ । रजकलाई प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागले छुट्टा छुट्टै मुद्या चलाउने तयारी गरेको बताएको छ । प्रहरीले उनलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गगत म्याद थप गरि अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरेका एसपी खड्काले जानकारी दिए ।
खोप लिन नेपाल वायुसेवाकाे विमान चीन जाँदै
कोरोनाको कारण यस वर्षको एसईई पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाटै
स्विस बैंकमा नेपालीको बचत बर्षमै दोब्बर
कोरोनाविरुद्ध भेरोसिल चिनियाँ खोप आजबाट सातै प्रदेशमा लगाइँदै
‘कमेडी च्याम्पियन सिजन–२’आगामी सातादेखि प्रशारणको तयारीमा
नयाँ विषेशता थप्ने तयारीमा फेसबुक
© 2021. All Rights Reserved under Nepali Awaaz